Endrik'io pejy io tamin'ny 5 Septambra 2021 à 18:17
2 174 octets ajoutés , il y a 10 mois
Endrik'io pejy io tamin'ny 20 Jolay 2021 à 06:31 (hanova)
Endrika tamin'ity 5 Septambra 2021 à 18:17 ity (hanova) (esory)
== Ny fivavahan' ny Samaritana ==
Ny [[Samaritanisma|fivavahan' ny Samaritana]] dia mifanakaiky amin' ny [[Jodaisma|fivavahana jiosy]], nefa ny boky dimy voalohany ao amin' ny [[Baiboly]] ihany no ekeny ho [[Soratra Masina]].
=== Ny tendrombohitra Gerizima ===
== Jereo koa: ==▼
Ny tendrombohitra [[Tendrombohitra Garizima|Gerizima]] no tendrombohitra masina fa tsy i [[Ziona]] na Siona.
Tany amin' ny taona 330 tal. J.K. ny vahoaka samaritana dia nanorina tempoly teo an-tampon' ny tendrombohitra Gezirima izay nanjary foibentoeran' ny fivavahana samaritana. Noravan' ilay mpanjaka [[Hasmôneana|hasmoneana]] atao hoe [[Joany Hirkano I|Joany Hirkana I]] io tempoly io tamin' ny taona 108 tal. J.K. Ny emperora Zeno, izay nanjaka hatramin' ny taona 474 ka hatramin' ny 491 dia nanenjika ny [[Jiosy]] sy ny Samaritana sady nandrodana ny tempoly samaritana (fanidroany izany) izay tsy voaorina intsony. Na dia noravana aza ny tempolin' ny Samaritana dia nijanona ho foiben' ny fivavahana samaritana ny tendrombohitra Garizima hatramin' izao.
=== Ny Baiboly samaritana ===
Ny [[Baiboly samaritana]] na Torah samaritana na Pentateoka samaritana dia ny [[Soratra Masina|soratra masin]]' ny fivavahana samaritana izay tsy ahitana boky hafa ao amin' ny Baiboly jiosy ([[Tanakh]]) afa-tsy ny Lalàna ([[Torah]]) na ny [[Pentateoka]]. Voasoratra amin' ny fiteny hebreo samaritana sy amin' ny [[abidy samaritana]] izany Baiboly izany.
Misy fahasamihafana ny votoatin' ny Torah hebreo amin' ny Torah samaritana. Ny lehibe indrindra amin' ireo dia ny fiheverany fa tsy i [[Jerosalema (Andro Taloha)|Jerosalema]] fa ny tendrombohitra [[Garizima]] no toerana masina. Ny ny didy faha-10 ao amin' ny [[Didy Folo|Didy folo]]<nowiki/>n' ny Torah samaritana dia ahitana ny fanajana an' i Garizima ho ivon-toeran' ny fanompoam-pivavahana.
=== Ny fety ===
Ny fety samaritana lehibe indrindra dia ny fetin' ny Paska. Tsy mitovy amin' ny Jiosy izay tsy manatanteraka intsony ny soron' ny zanakondrin' ny Paska ny Samaritana fa mbola manao izany iray andro mialoha ny Paska eo amin' ny tendrombohitra [[Tendrombohitra Garizima|Garizima]]. Ao koa ny [[fivahiniana masina]] izay tanterahina intelo isan-taona eo amin' ny tendrombohitra Garizima.
▲== Jereo koa: ==
* [[Tetiandro samaritana]]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/1037444"